लामो समय सम्म जवान रहनेहरुका लागि खुसीको खबर ! बैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए सधैभरी जवान रहने प्राकृतिक औषधी ... - E ALL NEPAL
लामो समय सम्म जवान रहनेहरुका लागि खुसीको खबर ! बैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए सधैभरी जवान रहने प्राकृतिक औषधी …
एजेन्सी । प्रकृतिको नियम नै यस्तो छ कि मानिसले जन्म लिन्छ जवान हुन्छ बुढो हुन्छ अनि प्राण छोड्छ । अब बैज्ञानिकहरुले बुढो नदेखिने औषधी बनाएका छन् । बैज्ञानिकहरुले मान्छेलाई सँधै जवान राख्ने औषधी पत्ता लगाएको दावी गरेका हुन् ।
यो औषधीले बढीरहेको उमेरको प्रभाव शरीरमा पर्न नदिने र मानिसलाई लामो समय सम्म जवान राख्ने दावी शोधकर्ताहरुले गरेका छन् ।
सगरी मुटुको समस्या समाधान गर्ने यो औषधीले मानिसलाई जवान रहनका लागि मद्धत गर्ने छ । स्क्रिप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट र मेयो क्लिनिकका शोधकर्ता बैज्ञानिकहरुले ′सेनोलाइटिक्स′ नामको औषधी पत्ता लगाएका हुन् ।
उमेरका कारण रोगी हुँदै गएका मानिसलाई यस्ता रोगबाट बचाउँन समेत यो औषधी उपयोगी हुन सक्ने छ । बैजानिकहरुका अनुसार यो औषधीले मानिसलाई बुढो हुनबाट रोक्ने छ । शरीरका कोषिकाहरुलाई जिवित र सक्रिय राखेर मानिसलाई जवान राख्ने तत्व यो औषधीमा रहेको बताइएको छ ।
बैज्ञानिकहरुले परीक्षणबाट पुष्टी भैसकेको यो औषधी अव बजारमा पठाउन सकिने समेत बताएका छन् ।बेलायतको न्यू क्यासल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टमस भोन ग्लीनिकीले बैसैमा बुढा देखिने ब्यक्तिका लागि यो औषधी सहायक हुने बताए ।
क्रोनिक इन्फ्लामेसनका कारण मानिसहरु उमेर भन्दा छिटो बुढो देखिन थालेको र त्यसको निवारणका लागि यो परीक्षण गरिएको उनको भनाइ छ । यो परीक्षणको सफलताले मानिसहरुलाई बुढो हुन रोक्न सकिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको शोधकर्ताहरुले बताएका छन् ।
Previous article प्रेम गर्नु छ भने यि राशीकि युवति सगं गर्नुहोस कहिल्यै धोका मिल्दैन : जानकारी लिनुहोस तपाई पर्नु भयो कि भएन
Next article महिलामा यसकारण बाझोँपनको समस्या आउँछ : समयमै जानकारी लिनुहोस नत्र आमा बुबा बन्ने सपना अधुरो रहला नि